विवाह गरेका नायिकालाई खेलाउँदा फिल्म चल्दैन रे ! : रेजिना उप्रेती (भिडियो सहित) « Dhankuta Khabar
विवाह गरेका नायिकालाई खेलाउँदा फिल्म चल्दैन रे ! : रेजिना उप्रेती (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति :9January, 2020
काठमाडौ । नायिका रेजिना उप्रेती अहिले चलचित्रमा भन्दा बढि चलचित्र कलाकार संघको काममा बढी व्यस्त रहेकी छिन । केहि समय अघि नायिकाहरुको सम्मानका लागि भव्य कार्यक्रम समेत आयोजना गरेकी थिईन । आफु चलचित्रमा नायिकाको रुपमा सक्रिय नहुनुको कारण आफ्नो विवाह पनि रहेको बताएकी छिन् ।
रेजिना उप्रेतीको अनुसार जब नायिकाले विवाह गर्छन तब निर्माता निर्देशकहरुले नयाँ नायिका खोज्न थाल्छन जसले गर्दा विवाह गरे पश्चात नायिकाहरु सक्रिय हुन गाह्रो भएको छ । चलचित्र भनेको कन्टेन्टले चल्ने हो तर नेपालमा नायिका र नायकले गरेर चल्ने सोच भएकाले गर्दा नायिकाहरुलाई विवाह पश्चात चलचित्रमा नलिएका हुन् ।
क्यानाडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै रेजिना उप्रेतीले आफु चलचित्रबाट हराएको छैन बरु आफु कलाकार भएर योगदान गरिरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । रेजिना भन्छिन, “मैले चलचित्र नखेले पनि म चलचित्र छेत्र मै योगदान गरिरहेको छु ।
नेपालमा कन्टेन्टमा भन्दा नायिकामा जोड दिने भएर विवाह भएका नायिका लिंदा चलचित्र चल्दैन भनेर हामीलाई चलचित्रमा लिदैनन् । यहाँ विवाह भएका नायिकालाई बिर्सिएर नया नया नायिका खोज्ने चलन छ जुन भविष्यलाई राम्रो होईन । हाम्रो योगदानको पनि कदर गर्नुपर्छ त्यसैले हामीलाई लिएर राम्रो कन्टेन्टको साथ चलचित्र बनाउनु पर्ने हो तर यहाँ नया नायिका मात्र खोज्ने चलन छ ।”
“मलाई चलचित्रमा देखिने रहर भए अहिले पनि चलचित्रमा नायिका बन्न सक्छु तर त्यसरी आएर न मेरो दर्शक खुशी हुनुहुन्छ न मलाई आत्मसन्तुष्टि नै हुन्छ । म राम्रो कन्टेन्ट लिएर आफूलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र त्यहि कुर्दै बसेकी छु । आशा गरुम म चाडै नै राम्रो चलचित्र लिएर दर्शक सामु आउनेछु ।”
आफुले चलचित्रमा काम गर्दा धेरै संघर्ष गरेको कुरा सम्झिदै रेजिना भन्छिन, “मैले रोमान्टिक देखि एक्सन रोल सम्म गरेकी छु । हाम्रो समयमा नायिकालाई एक्सन रोलमा काम गर्न गाह्रो हुन्थ्यो तर हामीले धेरै दुख गरेर चलचित्र गर्नेगर्थ्यौ जसले गर्दा आज मेरो हातमा दर्जनौ अवस्मरणीय चलचित्रहरु छन् ।”
पल शाहसँग नाम जोडिएकोमा यसो भन्छिन् नायिका आँचल शर्मा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । चर्चित नायिका आँचल शर्माले वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि दिएको अन्तर्वार्तामा आफूलाई अहिलेपनि
आज प्रसारित “हल्का रमाइलो” को २९ औ भाग यस्तो छ ! हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाण्डौ । मिडिया हबको प्रस्तुति रहेको हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘हल्का रमाइलो’ प्रत्येक हप्ताको आइतबार
कस्ले पाउला पु: न इन्ट्री ? हेर्नुहोस् नेपाल आइडलबाट टप १० मा पुगेर बा हिरिएकाहरुको आजको प्रस्तुति
काठमाडौं । फ्रेन्चाइज सिङगिङ रियालिटी–सो नेपाल आइडल सिजन–३ मा यो हप्ता मेघा श्रेष्ठ
नेपाल आ इडलमा को होला त त्यो भा ग्यमानी ? जो बा हिरिएर पनि वाइल्ड कार्ड मार्फत पुनः प्रवेश गर्दै